Kimisteri - Wikipedia
Kimisteri (Carabi: كيمياء Laatiin: chem (kēme), ay Asalkeeda waa si kastaba ha ahaatee muransan yahay) waa saynis ah in daraasad ah arrinta iyo inta ay ka kooban, dhaqanka, qaabka iyo guryaha, iyo sidoo kale isbedelka waxaa Oo Qaliin lagu guda jiro falgalka kiimikada . chemistry ayaa baaritaan ku noocyada kala duwan ee atamka, udhigo, taagoo, kiristaalo, iyo dalalka kale ee arrinta, sidoo kale keligiis ama lagu daro, ku lug fikradaha tamarta iyo entropy ee la xiriirta Ukaalmayn ee hababka kiimikada.
Dhaqan qaybsan laamood chemistry by nooca arrinta ay macaamiloon. meelaha waxaa ka mid ah:
Imanba Chemistry (sahaminta ee arrinta ka imanba).
Organic Chemistry (sahaminta of organic) arrinta carbon ku salaysan ().
Kiimikada noole (sahaminta of walxaha kiimikada noolaha).
Qaabka dhismaha jirka Kimisteri (sahaminta of hababka kiimikada isticmaalaya lagu daydo jirka iyo xaalado).
Baaritaan sax ah oo sugan Kimisteri (falanqaynta ee tijaabada si aad u hesho fahamka Halabuurka kiimikada iyo qaab-dhismeedka kiimikada).
Nukliyeerka Kimisteri (meesha xuduntii waa in diiradda iyo waxbarashada saamaynta shucaaca on falgalka kiimikada, isotopes kala duwan ee guryaha kiimikada, iyo sidoo kale isbadal ah ee xubno ka dhex midoobaan ama suuska dabiiciga ah).
Teori Kimisteri (waa magac wadajir dhowr Lahjadaha teori chemistry in lagu saleyn karaa in qoraalkii ka badan wax ku ool ah ee kimistari, sida chemistry galmada in lagu saleyn karaa in ku dhowaad dhammaan beerihii chemistry).
Sanadihii la soo dhaafay, dhowr ah oo nidaamo gaar ah soo baxay. Tusaale ahaan waxaa ka mid ah neurochemistry (sahamin ah kiimikada habdhiska), chemistry deegaanka (daraasadda of hababka kiimikada ee dabiiciga ah) iyo qalabka chemistry (daraasadda of qalab kala duwan).
Chemistry markii hore dhaqmaa sida alchemy, protoscience ka oo chemistry soo shaac baxday. 
Kimistari (; ) waa barashada aasaasiga ah ee sayniska maatarka( matter) iyo iskudhiskiisa, iyo hababka ay u falgalaan. Barashada Kemistarigu waxa uu si qoto dheer uga hadlaa waxayaabahan soo socda.
qaababka iyo hababka maatarka (structure of atom)
kiimikeeynta warshedaad (industrial chemistry)
Qaabaka kimistriga noolaha (industrial chemistry)
matter waa waxii mugleh meel marrana buuxsha.koonkaan aynu ku noolnahay waxa u ka koobanyahay maatar.haddii aad fiiriso agagaarkaaaga shay walba waa maater. maaterka waxaa loo qeybiyaa 3 qeybood oo kala ah Adke (solid), Dareere (liquid), iyo neef (air). kimstarigu waa barashada maatarka iyo sida uu isu bedbedalo. kimistarigu waa barashada walxaha iyo isbedelkooda. maatarku waa wixii aan tamar ahayn. koonkan waxauu kakooban yahay tamar iyo maatar. tamarta waxaa kamida ilayska kulka korontada maganadka iwm. insha allaah nagala soco casharka danbe...
Kimisteri waa waxbarasho ee isdhexgalka u dhexeeya walxaha kiimikada,  oo ka kooban atamka ama qayb ka subatomic kaliya:. Protons, electrons iyo neutrons  Atamka isku daro si ay u sameeyaan u taagoo ama kiristaalo. Chemistry waxaa mararka qaarkood loo yaqaan "sayniska dhexe". (A: sayniska dhexe), sababtoo ah waxaa isku xira dhowr cilmiga kale ee dabiiciga ah sida xiddigaha, physics, qalabka sayniska, bayoolaji iyo cilmi dhul  
asal ahaan Chemistry la ogan karo in jilaa ka weyn qaar ka mid ah, oo loo yaqaan alchemy, caqiido ah oo uu soo dhaqma kumanaan sano in meelo badan oo dunida ah. 
Dhismaha waxyaabaha aan u isticmaalno in nolol maalmeedka iyo sifooyinka arrinta aan si joogto ah la dhaqanka saameysey iyadoo ay sabab u guryaha walxaha kiimikada. Tusaale ahaan, steel waa mid dhib badan bir leh content carbon hoose sababtoo ah atamka ay si adag u wada addoonsi in dhisme crystal deggan; gubasho ama qoryo Oo Qaliin lagu qayilo degdeg ah waxaa sababtoo ah kor ku heerkulka gaar ah iska dhici karta inay oksijiin in reaction kiimikada ah, sonkorta iyo milixda baabbi'isaa biyo ay sabab u tahay sifooyinka Madbacada qaranka / kelli ay yihiin sida in xalka roon tahay in xaaladahan.
Kalaguur yaasha gudbayo la bartay sida doonaa sabab u ah is dhexgalka labada u dhexeeya walxaha kiimikada kala duwan ama inta u dhaxaysa arrinta iyo tamarta ee kimisteriga. Cilmiga kimisteriga dhaqameed inta lagu guda jiro raadinta ee isdhexgalka u dhexeeya walxaha kiimikada shaybaarka kimistari oo isticmaalaya noocyo kala duwan oo qalab galaas.
Reaction kiimikada A waa beddelidda ee walxaha kiimikada in mid ama ka badan waxyaabaha kale.  Reaction A waxaa loo qori karaa sida caanaha falcelin. Tirada atamka si bidix iyo midig ee isla'egta ah isbedel kiimikada ah inta badan waa loo siman yahay.
Tabar iyo entropy jira laba fikradaha aad u muhiim ah in ku dhowaad dhammaan chemistry. Walxaha kiimikada waxaa loo kala saaraa by ay qaab-dhismeedka, qaabka, iyo sidoo kale Halabuurka kiimikada ay. Waxay la falanqeeyay karo by hababka kala duwan ee falanqaynta kiimikada, tusaale ahaan, spectroscopy iyo chromatography d diyaariye farxaan muxumed salaad ama farxaan lamagalaay[bodhari]suftu
Waxaa laga keenay "https://so.wikipedia.org/w/index.php?title=Kimisteri&oldid=216819"
Last edited on 14 Sebteembar 2021, at 21:47
Boggaan waxaa markii ugu danbeesay wax laga badalay 14 Sebteembar 2021, marka ee eheed 21:47.